भारतले नक्सा संशोधन गरे भनेर गर्यो अर्को अचम्मको चलाखी ! – " सुलभ खबर "
भारतले नक्सा संशोधन गरे भनेर गर्यो अर्को अचम्मको चलाखी !
काठमाडौं : नेपालमा चर्को विवाद भएपछि भारतले नक्सा तत्काल संशोधन गर्दै अर्को भ्रम छरेको छ। कात्तिक १५ गते जारी नक्सामा काली नदी भारतमा प्रस्ट देखिएपछि विवाद बढेको थियो। यो साता बनाएको अर्को नक्सामा काली नदी त्यहीँ छ, मात्र नाम झिकिएको छ (हेर्नुहोस् २ फरक नक्सा)।
सन् १९६२ मा भारत र चीन युद्धपछि तत्कालीन नेपाल सरकारकै सहमतिमा कालापानीमा भारतीय सेना बस्यो। भारतले त्यही भूभागमा छुट्टै कुलो बनाएर लिपु खोलाको पानी ल्याएर पोखरी बनायो। त्यसैबाट निकालेर कृत्रिम काली नदी बनायो। भारतले लिम्पियाधुरा क्षेत्रको ३३५ र कालापानी लिपुलेकको ६० वर्गकिलोमिटरसहित ३९५ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग कब्जा गरेको छ। यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
पैँतीस दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्छ : बिजुक्छे
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले ३५ दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नगए भारतले मिचेको सीमाका विषय जटिल बन्ने बताउनुभएको छ । रफत सञ्चार क्लबले आज आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बिजुक्छेले सरकारले सीमा अतिक्रमण बारेको मुद्दालाई बेलैमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र सुंयक्त राष्ट्र सङ्घमा लैजान नसकेको भन्दै ३५ दिनभित्र सरकारले यो विषय उक्त स्थानमा लानुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर आफ्नो बनाउनु र यस विषयमा नेपाल सरकारले कुनै ठोस पहलतर्फ लाग्न नसक्नु कमजोरी भएको आरोप लगाउनुभायो । नेपालको कूटनीतिक पक्ष सदैव कमजोर रहेको भन्दै बिजुक्छेले कूटनीतिक असफलताकै कारण वैदेशिक हस्तक्षेप तीव्र बन्दै गएको बताउनुभयो । चीनले नेपालको सीमा नमिचेको दाबी गर्दै बिजुक्छेले चीनले सीमा मिचेको विषय हल्लामात्र भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषयमा अध्यक्ष बिजुक्छेले सरकारले हाल भएका मन्त्रीलाई किन हटायो र नयाँ मन्त्री किन ल्यायो भन्ने कुनै ठोस विषय जानकारी दिन नसक्नु सरकारको असक्षमता भएको बताउनुभयो । तीन तहको सरकारले झनै जटिलता निम्त्याएको बताउँदै उहाँले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुगेको भन्नु नै जनतालाई भ्रममा पार्नु हो भन्नुभयो ।